Rakkoo Oromiyaafi Somaalee gidduu jiruu fi gahee mootummaa federaalaa - BBC News Afaan Oromoo
Walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaafi Somaalee jidduutti uumameen gama lamaaniinuu lubbuun namoota hedduu yoo darbu, dhalattoonni Oromoo 600,000 ol qe'eefi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Ragaan qabatamaan argamuu dhabus gama Somaaleetinis namoonni buqqa'uutu himama.
Rakkoo lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti gaaga'umsa guddaa geessise kanaaf sababoota garaa garaatu himamaa turan.
"Walitti buu'iinsi naannolee lamaan gidduu jiru wal dhabdee dhimma daangaa miti. Wal morkii olaantummaa siyaasaa goonfachuuf taasifamudha," jedhu Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa dhimma nageenyaafi tasgabbii sadrkaa dokitarummaa kan ta'an Obbo Kumaa Baqqalaa.
Kanaafis "wal dhabdeen kun walitti buu'insa uummataa lameenii osoo hin taanee, kan namoota ajandaafi fedhii dhuunfaa isaanii milkeessuuf wixineeffamee eegalsiifamedha," jedhu.
Rakkoonis ta'e, furmaanni daangaa naannolee lamaaniirra osoo hin taane, magaalaa Finfinnee keessa jira jechuun obbo Kumaan yaada isaanii BBC'f ibsan.
Mootummaan Federaalaa maal hojjete?
Mootummaan Federaalaa rakkoo nageenyaa naannolee lamaan gidduutti uumame furuuf tarkaanfiin inni fudhate hin jiru, yoo jiraates gahaa miti komiin jedhu jiraattota biraa ni dhagaahama.
Raayyaan ittisa biyyaa iddoowwan kunneenitti bobbaafame garee lamaan ija tokkoon ilaalaa akka hin jirre fi jiraattota irratti ajjeechaa raawwataa akka jiru qondaaltoonni mootummaa sadarkaa aanaa BBC'n hasofsiise himaniiru.
Himannaan kun jiraachuu kan himan, Ministirri Dhimmoota Komunikeeshinii Dr. Nagarii Leencoo, raayyaan ittisa biyyaa ergama akkasii hin qabu. namootni dhunfaa ilaalcha sirrii hin taane qaban raayyaa ittisa biyyaa keessa jiraniin gochi akkasii raawwatameera yoo ta'es qoratamee tarkaanfiin ni fudhatama jedhaniiru.
Namoota walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabaniifi yakka raawwatan seeratti dhiyeessuuf tumsa poolisiin federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasiseen gama Oromiyaatiin shakkamtoonni 98 to'annoo seeraa jala oolusaanii Dooktar Nagariin himaniiru.
"Mootummaan Naannoo Oromiyaa shakkamtoota to'annaa seeraa jala oolchuuf sirriitti hojjetaa jira, gama mootummaa naannoo Somaaleetiin garuu shakkamtoota miidhaa geessisan seeratti dhiyeessuuf hojiin hojjatame akka hin jirre mootummaan federaalaa qorannoon mirkaneefateeras," jedhan.
Kanaafuu, mootummaan federaalaa gama Somaaleetiin shakkamtoota 38 adda baasee keessaa 5 to'annoo jala oolcheeras jedhan.
Gama biraan Koreen waldhabdee naannoolee lamaanii hiikuuf Ministeerota, manneen hojii fi dhaabbilee namoota deebisanii dhaabuuf gahee qaban dabalate hundaa'es, ALI Sadaasa 10 bara 2010 koonfaransii nageenyaa qopheessuuf karoorfatee ture osoo hin taasifamiin hafe jedhan Dr. Nagariin.
Kunis dursa namoonnii yakka raawwatamee fi badii gaheef itti gaafatamoo ta'an osoo to'annoo jala hin ooliin konfaransiin gaggeeffamuun bu'aa hin qabaatu yaadni jedhu gama Oromiyaatiin waan dhiyaateefi jedhan.
''Komiin uummanni Oromoo daangaarra jiru qabu dhaggeeffatamuu qabaa,'' kan jedhan Dr. Nagariin, keessattuu poolisiin addaa Somaalee kan leenjiifi deggersi mootummaa federaalaatiin kennamuuf, uummata daangaarra jiran nagaa dhowwaa jira komiin jedhu sirridha, kan dhaggeeffatamuu qabudhas jedhaniiru.
"Hanga ammaatti waanti ilaalamaa jiru jira. Tarkaanfiin fudhatame waan hin jirreef uummata hin quufsine. Dhugaan uummata keessa jira. Uummata dhaggeeffachuun nurra jira. Ejjennoon mootummaa federaalaas kana," jedhan.
Madda odeeffannoo gara biraatinis, naannoo Somaaleetti qondaaltoota motummaa dabalatee qaamooleen adeemsa nageenyaatti gutuu uumaa jiran irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu, Ittaanaan ministira mummuchaa Obbo Damaqaa makoonniin dubbachusanii dhagahameera.